एउटै गोत्रको बिवाह किन हुदैन ? कुन कुन थरका गोत्र एउटै हेर्नुहोस – Samacharpati
नामसँगै प्रयोग गरिने थर व्यक्तिको विशेष पहिचान हो । थर सँगै गोत्रको सम्बन्ध पनि जोडिएको हुन्छ । थर अनुसार गोत्र र गोत्र अनुसार प्रवरको निर्धारण गरिएको हुन्छ । जुन वैज्ञानिक र व्यवस्थित रहेको पनि पाइन्छ । थर, गोत्र र प्रवरले हाम्रो इतिहासलाई बोकिरहेका छन् । हमी कुन ऋषिका सन्तति हौ भन्ने कुरा गोत्रले वहन गरेको हुन्छ । तिनै गोत्रसँग सम्बन्धित प्रवरले नजिकको सम्बन्ध गाँसेको हुन्छ । मानव विकासको इतिहासमा पौरस्त्य वाङ्मयका पहिला व्यक्ति मनु हुन् । मनु र शतरूपाबाट नै यो संसारमा मानवको विकास भएको हो । सो पश्चात् ऋषिहरूको उत्पत्ति भएको कथा प्रसङ्ग पाइन्छ ।
थर कुनै पनि व्यक्तिको मुख्य पहिचान हो । नाम धेरैसँग मेल खान्छ, थर पनि खान्छ । तर, थरसँग गोत्र पनि जोडिएको हुन्छ, यो चाहिँ सीमित हुन्छ । थर वास्तवमा निश्चित व्यक्तिको पारिवारिक परिचय हो । वंश र थर पुरुषबाट सन्तानमा जाने पितृसत्तात्मक परिपाटीका कारण थर यथार्थमा पुरुष वंशगत लहरोको रूपमा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जाने गरेको छ । गोत्र कुल छुट्याउने भरपर्दो आधार हो । एकै जनाबाट जन्मिएको ठानिने हुनाले एउटै गोत्र भएका थरमा बिवाहवारी चल्दैन । त्यसैले थर र गोत्रलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ ।कुन थरको गोत्र के हुन्छ ? हेर्नुहोस ।
गोत्रको अर्थ कुल वा वंश भन्ने हुन्छ । गोत्रले वंश विस्तार गर्ने महर्षिहरूलाई पनि बताउँछ । विशेषतः विश्वामित्र,जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ र कश्यप सप्तर्षि र अगस्तिसमेतका सन्ततिलाई पनि गोत्र भनेर सम्बोधन गरिन्छ । गोत्रका ४९ भेद बताइएको छ । गोत्रवंशप्रवर्तक महर्षिहरूमा—‘‘ विश्वामित्रो जमदग्निर्भारद्वाजोऽथ गौतमः । अत्रिर्वशिष्ठः कश्यप इत्येते सप्तऋषयः । सप्तानामृषीणामगस्त्याष्टमानां यदपत्यं तद्गोत्रमित्याचक्षते । यद्यपि गोत्राणि अनन्तानि गोत्राणां त सहस्राणि प्रयतान्यर्बदानि च । इत्यक्तेस्तथाप्यूनपञ्चाशदेव गोत्रभेदाः ’’ भनी धर्मसिन्धु र निर्णयसिन्धुमा ४९ प्रकारका गोत्र रहेको कुरा उल्लेख पाइन्छ ।
गोत्रका वंश फैलाउने ऋषि विशेषलाई प्रवर भनिन्छ । प्रवरको अर्थ मुख्य वा प्रधान भन्ने पनि हुन्छ । गोत्रलाई विस्तार गर्नेवाला ऋषि विशेष नै प्रवर हुन् । अधिकांशतः तीन प्रवर प्रचलित पाइन्छन् । यसैगरी पाँच प्रवर पनि केही थर गोत्रीले प्रयोग गरेका छन् ।
थरको नामाकरण कार्यविशेष, स्थानविशेष, वस्तुविशेषका आधारमा निर्धारण भएको पाइन्छ । भण्डारको काम गर्ने भण्डारी, अधिकारको प्रयोगगर्ने अधिकारी, निरोली खोलाको आसपास बस्ने निरौला आदि आदि । यस विषयमा आआफ्ना रीतिस्थिति कुल परम्पराले पनि भिन्नता ल्याएको हुन सक्छ । कतिपय भाषाका स्थानीय भेद एवं अन्यभाषासँगको प्रभावले पनि थर भिन्न बन्न पगेका पाइन्छन् ।
यो थरगोत्रावली संकलनको पहिलो प्रयास हो । तपाईका र तपाइले जाने बुझेका थर, गोत्र र प्रवरका बारेमा टिप्पणी गरिदिनुहाेला ।
अगस्ती – ढुङ्गेल
अत्रि – अधिकारी (ठाडा राई), खतिवडा, गोतामे, चापागाई, पहारी, वस्ति अत्रि
आत्रेय – बगाले, कालीकोटी, खँड्का, थापा (बगाले,पुवार ,खुनाल), पौडेल (काला,सेता), दवाडी, दुवाडी, दुलाल, पोखरेल (पानी)
उपमन्यु – ढकाल, दुलाल, भट्ट, मैनाली
आङगीरस – जोशी (सिलाईँ)
कश्यप – अधिकारी(अलिना)
काश्यप – अधिकारी, कौवारी, खिलचिने, गर्तौला, घिमिरे, ठकुरी (खान, चन , ज्यु , राय , सिंह , मल्ल , मेधासी , कस्केली ), थापा (गोदार), भँडारे, बोकाटी, माझी, सोणारी, बुढाथोकी, पाँडे, पाण्डे, सिमदलिया बइखोरा, रायमाझी, शाह, शाहा, हमाल, पर्छायी
कौशिक – ढुङ्गना, बस्ताकोटी, बुढाथोकी, बिष्ट, विणारी, रिमाल, रेग्मी, लुईँटेल, पुडासैनी, बानियाँ, खप्तरी
गर्ग – खँड्का, बास्तोला, आचार्य, गजुरेल, चुडाल, भुर्तेल, किजार, रिसाल, रोकाहा, लामिछाने
कौडिन्य – आचार्य, खड्का, त्रिताल, न्यौपाने कौडिन्य, पराजुली, पाठक, बास्कोटा, थापा(गाम्ले, गाँउले), मरासीनि, लकाँय, सत्याल, सापकोटा(कोतिन्य)
गौतम – त्रिपाठी(सामवेदी)
घृतकौशिक – कार्की (सुतार), खँदाल (खोरिया र गैरा), नेपाल, पण्डित, बराल
ज्ञावली माण्डव्य बाकी तस्विरमा हेर्नुहास
आज पौषे औँशी पितृ उद्धारका लागि गोकर्ण, बराहक्षेत्र आदीमा तिर्थ श्राद्ध
आज सफला एकादशी ब्रत
देशभर थप २ सय ७४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि